Itroli Ye-Tiered Iluhlobo
Itroli Ye-Tiered Iluhlobo Le trolley yenyathelo yenye yezinto ezilandelelanayo noyilo lomyili we-K wophawu lwe-QUISO. Yenziwe ngeenkuni eziqinileyo ezenziwe ngobuchule. Uyilo lwayo oluqinileyo kunye nesitokhwe lwenza ukuba ilungele ukukhonza utywala kwitafile yokutyela. Ukhuseleko kunye nobungakanani benkonzo, iiglasi zinqunyanyisiwe kwikhusini, iibhotile zixhonywe kukunganxibisi okulingeneyo, amavili emizi-mveliso ane-rolling egudileyo nethe cwaka.
Ukusebenza Kweetolley Ezisebenzayo
Ukusebenza Kweetolley Ezisebenzayo UPatrick Sarran wayila i-Km31 ukuba ibonakale kwindawo yokutyela. Esona sithintelo siphambili yayikukungasebenzi kakuhle. Le nqanawa inokusetyenziselwa ngokukodwa xa kukhonzwa itafile enye, okanye kwilayini kunye ne-buffet. Umyili wayila i-Krion echaziweyo ebekwe phezulu kwisiseko esinamavili esifanayo wayenzela uluhlu lwee-trolleys ezinje nge-KEZA, emva koko i-Kvin, i-Herbal Tea Garden, kunye ne Kali, zidibene uluhlu lwe-K. Ubulukhuni be-Krion bavumela ukuba kukhethwe ukugqitywa kokukhanya okugqibeleleyo, kunye nokuqina okufunekayo kwindawo efanelekileyo.
Umatshini Ozenzekelayo Wekhofi
Umatshini Ozenzekelayo Wekhofi Ilula kwaye inqabile, imigca ecocekileyo kunye nezixhobo ezikumgangatho ophezulu zigqiba ukwenza uyilo lwe-F11 lwanelise iimeko zobungcali nezasekhaya. Umbala opheleleyo we-7 "uboniso lokuchukumisa kulula kakhulu ukusebenzisa kwaye unomdla. F11 ngumatshini" omnye wokucofa "apho ungazenzela khona iziselo zakho ezikhethiweyo ekukhetheni ngokukhawuleza. I-hopper enobhontshisi eyandisiweyo, itanki lamanzi kunye nesiqulatho somhlaba zikhona ukuze sikwazi ukujongana nexesha eliphakamileyo leyure. Iyunithi yokwenziwa kwepatent inokubonelela nge-espresso exinzelelweyo okanye ikofu engaxinzezwanga rhoqo kwaye ivumba eli liqinisekiswa yicalfa zecaric ceramic.
Isixhobo Sokhuseleko umgangatho ophezulu wezinto kunye nokulula kuyilo lwenza esi sixhobo sokhuseleko sokuqaphela ubuso sihle, isitayile kunye nokuqina. Itekhnoloji ethe xhaxhe ngaphakathi ukuyenza ibe yeyona ikhawulezayo kwihlabathi kwaye ichanekile, akukho mntu unokukopela i-algorithm yayo. Imveliso yobungqina bamanzi enomoya obukhokhele kwicala elingasemva ukuze idale imozulu ekhoyo nakwiofisi ebandayo. Ubungakanani be-compact buyenza ifanele phantse yonke indawo kwaye imilo ivumela ukuba ibekwe ngokuthe tyaba okanye ngokuthe nkqo.
Ukuveza Ifanitshala Amakhaya ayakhula amancinci, ngoko ke kufuneka ifanitshala engasasebenziyo enokwenza izinto ngeendlela ezahlukeneyo. I-Dotdotdot.Frame yinkqubo yokuqala yefanitshala eneseto, enefayile kwintengiso. Esebenzayo kwaye idibene, isakhelo singagxunyekwa eludongeni okanye siyixhase ngokulula ukuze sibekwe ngasekhaya. Kwaye ukusebenza kwayo ngokwezifiso kuvela kwimingxunya engama-96 kunye noluhlu olukhulayo lwezixhobo ukulungisa kuzo. Sebenzisa enye okanye ujoyine iinkqubo ezininzi kunye njengoko kufuneka - kukho indibaniselwano engenasiphelo ekhoyo.
Inkqubo Yokuphinda Iguqulwe Inkunkuma
Inkqubo Yokuphinda Iguqulwe Inkunkuma Isigcawu sesigcawu sisisombululo sendalo yonke kunye noqoqosho sokuhlela izinto ezinokuphinda zisebenze. Iqela leebin pop-up lenzelwe ikhaya, iofisi okanye ngaphandle. Into enye inezinto ezimbini ezisisiseko: isakhelo kunye nengxowa. Isuswa ngokulula ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye, ilungele ukuthuthwa kunye nokugcina, kuba inokuthi iflethi xa ingasetyenziswa. Abathengi bayalela i-spider bin online apho banokukhetha khona ubungakanani, inani lee-Spider Bins kunye nohlobo lweebhegi ngokweemfuno zabo.
FinaMill Smart Ekhitshini Lokusila Tuesday 5 July
Catzz Ikati Ibhedi Monday 4 July
Perception Ikhefi Sunday 3 July
Itroli Ye-Tiered Iluhlobo Ukusebenza Kweetolley Ezisebenzayo Umatshini Ozenzekelayo Wekhofi Isixhobo Sokhuseleko Ukuveza Ifanitshala Inkqubo Yokuphinda Iguqulwe Inkunkuma